USELMA BLAIR UKHUMBULA IIMPAWU ZOKUQALA ZE-MS KWIFOTO YE-INSTAGRAM - IIMEKO ZEMPILO
USelma Blair ukhumbula kwangaphambili i-MS Flare kwi-Instagram Ifoto: Umlenze wam ubufile
Eyona / Iimeko Zempilo
UStefanie KeenanImifanekiso kaGetty
USelma Blair wabelane nge-Instagram ngefoto ekhumbula iimpawu awazifumanayo ngexesha lokuqala kwe-MS.
UBlair ucacisa ukuba wayengazi ukuba kwenzeka ntoni, kwaye nomlenze wakhe ufile.
AmaFlares ahlala esenza ukuba iimpawu ze-MS ezikhoyo zibe mbi ngakumbi, zikhokelela kwimicimbi yokuhamba, ukudinwa kakhulu, kunye nobunzima bokuthetha.
Ukuba kukho enye into ebonakalayo malunga nohambo lukaSelma Blair lwe-multiple sclerosis (MS), kukukwazi kwakhe ukunyaniseka ngokukhohlakeleyo ngayo yonke into ahamba kuyo ngaphambili, ngexesha, nasemva kokuxilongwa. NgoLwesine, utyhile olunye ungqimba kwibali lakhe le-MS kwisithuba se-Instagram, apho akhumbula khona amava Iimpawu ze-MS ngaphambi kokuba afunyaniswe.
Ubhale lo myalezo: Ubusuku obuhle behlobo eMiami. I-flare yam yayisele ibetha. Bendingazi ukuba kwenzeka ntoni. Kodwa ndahlala phandle ndatya isidlo esimnandi kunye nomhlobo wam endimthandayo. Konke esinako ngoku. Oku. Ngaba lidlulileyo. Kodwa ndikhumbula ndisazi nje ukuva ubushushu emoyeni. Isipho solu hambo. Phantsi kwetafile umlenze wam ubufile. Khange ndikwazi ukuhlala ndivukile kwaye isandla sam sasekunene besingakwazi ukufumana umlomo wam. Kodwa ndandonwabile.
UBlair, 46, wafunyaniswa ene-MS ngo-Agasti 2018, kodwa uyavuma ukuba wazifumana iimpawu kwangaphambi koko. Kudliwanondlebe lwakutsha nje no Molo waseMelika elungileyo Wachaza ukuba wabona oogqirha abaninzi ngaphambi kokuba afumane ukuxilongwa ngokuchanekileyo. Ndineenyembezi, utshilo uBlair ngexesha lodliwanondlebe. Zazingezinyembezi zovalo, yayizinyembezi zokwazi ukuba ngoku kufuneka ndinikezele kumzimba ophulukene nolawulo kwaye kukho isiqabu kulonto.
Yintoni i-MS flare, ngokuchanekileyo?
I-Multiple sclerosis sisifo esingapheliyo sokudumba kwenkqubo ye-nervous system (aka, ingqondo yakho kunye nentambo yomqolo). I-MS flare-up (ekwabizwa ngokuba kukukhula, ukubuyela umva, okanye ukuhlasela) kwenzeka xa kuvela iimpawu ezintsha okanye iimpawu ezindala ziba nzima ukuzilawula, ngokwe UMbutho weSizwe we-Multiple Sclerosis . Iimpawu ezithile-ezinje ngokudinwa, ukuhamba nzima, iingxaki zombono, iintlungu, nokuba ndindisholo okanye ukurhawuzelela-kunokuphazamisa ukubanakho komntu ukuhamba okanye ukusebenza ngokufanelekileyo.
Kwimeko ka-Blair, i-flare-ups ithintele amandla akhe okuhamba (usebenzisa induku kwaye, kutsha nje, ibhayisekile yokuhamba), ashukumise izandla zakhe, athethe ngokufanelekileyo ngenxa ye-spasmodic dysphonia, kwaye uhlale uphaphile ngenxa yokudinwa okukhulu.
Ngexesha lokuqhambuka, ukudumba kuphazamisa inkqubo ye-nervous system yomntu ngokonakalisa i-myelin, okanye izinto ezinamafutha ezingqonge imicu yakho yentsimbi. Oku kubangela iingxaki zonxibelelwano phakathi kweempembelelo zemithambo-luvo, ezikhokelela ekukhubazeni iimpawu. I-flare ye-MS inokuhlala iintsuku ezimbalwa, iiveki, okanye iinyanga. Abantu banamava oku kukhula ngokwahlukileyo, kwaye iimpawu zinokwahluka kakhulu kumntu kumntu.
Kwii-flares ze-MS ezinzima, ezinje ngezo ziphazamisa ukuhamba, oogqirha bahlala bemisela ikhosi yeentsuku ezintathu ukuya kwezintlanu yeedosi eziphezulu zecorticosteroids zokunciphisa ukudumba ngokukhawuleza, ngokweNational Multiple Sclerosis Society.
Inkqubo yonyango ka-Blair ayaziwa, kodwa ukwenze kwacaca ukuba uceba kuphela ukuya phambili. UBlair wayigqiba iposti yakhe ngomnqophiso ochukumisayo okwangoku: Unyana wam ulele ecaleni kwam. Ndiva ukuphefumla kwakhe. Lowo ngumphefumlo omncinci, inkwenkwana eya kuvuka izele ngamandla. Ndizokugoba ecaleni kwakhe. Yenza le nto inokubuzisa kobu bomi bumnandi. I ngoku. Ngoku ndiyamthanda.
LANDELA UKUTHINTELA KWI-INSTAGRAM
lithetha ntoni inani lama-333 leengelosi
zeziphi izihlunu ezitsibayo zisebenza ngentambo
Ndiza kulifumana nini iyeza lokugonya
Ingelosi inombolo 1111